स्थानीयस्तरमै युवा रोजगार हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता स्थानीयस्तरमै युवा रोजगार हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
जिग्मे ढोण्डुप फुन्सोक पलवर विष्ट, पूर्व नवयुवराज, मुस्ताङ
रोयल मुस्ताङ रिसोर्टको मूल ढोकाबाट भित्र छिर्नासाथ हँसिलो मुहारका एक युवा देखिए । आफूहरू आउनुको कारण बताई उनको परिचय माग्दा आफू उक्त रिसोर्टको कर्मचारी भएको बताए । रिसोर्टका मालिकलाई बोलाइदिन गरेको आग्रहपछि उनले पूर्वयुवराज जिग्मे सिङ्घी पलवर विष्टलाई बोलाइदिए । उनीसँगको कुराकानीपछि पूर्व नवयुवराजसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने भएकाले पठाइदिन आग्रह गर्‍यौं । अन्ततः आफूलाई रिसोर्टको कर्मचारी बताउने उनै युवा उपस्थित भए । ४ वर्ष अमेरिका बसेर ‘एमबीए इन फाइनान्स’ गरेका मुस्ताङको पूर्व नवयुवराज जिग्मे ढोण्डुप फुन्सोक पलवर विष्ट बुबाले मुस्ताङमै रिसोर्ट खोल्न थालेपछि अमेरिकामा शुरू गरेको काम पनि छोडेर मुस्ताङ फर्किएका हुन् । उनी आफू मात्रै यहाँ रहने नभई अन्य युवालाई पनि आफ्नै क्षेत्रमा बसेर केही गर्न सकिने सन्देश र सम्भावना प्रवाह गर्ने प्रयत्नमा छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सार :
अमेरिका जानुअघि के योजना थियो ?
विशेष योजना त होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको आशमै गएको हुँ ।
एमबीए फाइनान्स रोज्नुको कारण त्यही विषयमा काम गर्ने भन्ने नै थियो होला नि, होइन ?
योजना त त्यही थियो । तर बुबाले बीचमै यहाँ होटल बनाउनुभयो । त्यसपछि उहाँको आग्रह र आफूलाई पनि यता आउनु नै ठीक लागेकाले पर्किएँ ।
उतै बसूँ जस्तो लागेन ?
(हल्का हाँस्दै)… त्यतिसारो लागेन । त्यहाँ जीवन सहज त छ तर एमदमै तनावपूर्ण पनि छ । यहीँ शान्ति छ, परिवार पनि यहीँ छ ।
तपाईंको पढाइको विषय यहाँ काम गर्ने क्रममा के कत्तिको लागू हुन्छ ? कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
मेरै विषय सोझै लागू गर्ने भन्दा पनि म हरेक विषयमा राम्रो गर्ने प्रयास गर्दै छु । होटलको व्यवस्थापन, ‘मार्केटिङ’ जस्ता काम गर्नुपर्छ, जुन गरिरहेको पनि छु । त्यसबाहेक मेरो अर्को उद्देश्य यहाँका युवालाई यहीँ बस्न प्रेरित गर्ने हो । तर बसाइँ सरेर जाने प्रवृत्तिले यहाँ यसो गरौं भनेर प्रेरित गर्न युवाहरू पाउनै गाह्रो छ । यो होटल स्थापना हुनुको उद्देश्य एउटा संस्कृति संरक्षण हो भने अर्को चाहिँ यहीँका युवाका लागि रोजगारी सृजना गर्नु हो ।
यो एउटा होटलले यहाँका युवालाई रोजगारी सृजना गर्न सक्छ त ?
यसले मात्रै यहाँका युवालाई रोक्न त सक्दैन । सरकारले साना आकारका व्यवसाय सञ्चालनका लागि देशका अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा यहीँका युवाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्दै समग्रमा राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दछ ।
स्थानीय निकायको बजेट यहाँका युवामाथि लगानी गर्नुपर्दा कुन क्षेत्र र काममा गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
यहाँको प्रमुख आधार पर्यटन नै हो । त्यसैले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सूचना तथा विज्ञापन गर्नुपर्‍यो । सडकले गर्दा खासगरी पैदलयात्री पर्यटकलाई समस्या भएको छ । सडकभन्दा परै पर्नेगरी अलग्गै ट्रेकिङ रूट होस् । त्यस्तै, लोमान्थाङमा प्रवेश शुल्क एकदमै बढी छ । त्यसलाई कम गर्ने हो भने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्छ र त्यसले थप रोजगारीको अवसर सृजना भई यहाँका धेरैभन्दा धेरै युवाले रोजगारी पाउँछन् । यी काम भए भने यही नै यहाँका युवामाथिको लगानी हुनेछ ।
मुस्ताङका युवा विशेषगरी कहाँ के गर्दै छन् ?
बाध्यता र हैसियतअनुसार खाडी मुलुक, अमेरिका, फ्रान्स र त्यहाँ नसक्नेहरू भारत, काठमाडौं, पोखरालगायत स्थानमा पुगेका छन् ।
मुस्ताङमा आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस होटलको कुनै प्याकेज छ ?
तत्काल त छैन । तर विस्तारै मुस्ताङको संस्कृति देखाउने खालका कार्यक्रम राख्ने तयारी भइरहेको छ ।